‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ च्याम्पिएन किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेश रोक, एयरपोर्टबाटै किन पठायो फिर्ता ? — Sanchar Kendra
‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ च्याम्पिएन किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेश रोक, एयरपोर्टबाटै किन पठायो फिर्ता ?
काठमाडौं । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ का विजेता किरण गजमेरलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै अमेरिका फिर्ता पठाएको छ। गजमेर ११ असोजमा कतार एअरको क्युआर ६५० नम्बरको विमानबाट त्रिभुवन विमानलस्थल ओर्लिएका थिए। उनलाई सोही दिन ‘डिपोर्ट’ गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि उनी त्रिुभवन विमानस्थलबाटै अमेरिका फर्किएका हुन। गजमेर ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ शो जितेको केही हप्तापछि अमेरिका फर्किएका थिए। केही हप्ता अमेरिका बसेर फेरि आएका किरणलाई विमानस्थलको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्न नदिएको हो।
किरण अमेरिकी नागरिक हुन्। नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार अमेरिकी नागरिकले एकपटकको प्रवेशमा जम्मा एक सय ८० दिन मात्रै नेपालमा बस्न पाउँछन्। किरणले यसअघि पनि तोकिएको दिन भन्दा बढी बसेकाले जरिवाना समेत तिरेका थिए।
अमेरिकी नागरिक गजमेरले सन् २०२१ मा नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारी सकेकाले उनलाई अमेरिका फिर्ता पठाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। गजमेरले सन् २०२१ मा सो अवधि बिताइसकेकाले उनी अब अझै तीन महिना नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।
किरण नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका हुन्। १४ बर्ष अगाडि अमेरिकी सरकारले भुटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देश लैजाने क्रममा उनी अमेरिका पुगेका थिए।
भुटानी शरणार्थीका रूपमा झापाको शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका गजमेरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०११ मा अमेरिका लगेको थियो। परिवारसहित अमेरिका बस्दै आएका गायक गजमेरले अमेरिकी भिसा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
६ देखि १४ वर्षका बालबालिकाको सहभागी रहने गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस किड्स’ प्रसारणमा आउने तरखरमा रहेको छ । हालै ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन सम्पन्न गरेको हिमालय टिभीले बालबालिकाकै गायन प्रतिभा निखार्ने उदेश्यले उक्त शो सुरु गरेको हो ।
केही अगाडि बालबालिकाहरूको अडिसन सम्पन्न भएको शो को ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ तयारी भइरहको छ । छिट्टै एक प्रेसमिट गरेर बुधबारबाट ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ सुरु गर्ने योजना आफ्नो रहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले बताए । शो प्रशारण भने एक महिना पछिबाट हुने पौडेलको भनाई रहेको छ ।
यो शोका लागि पनि ४ कोच छानिएका छन् । जसमध्ये दुई राजु लामा र प्रमोद खरेल ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ कोच हुन् भने अन्य दुई कोचको रुपमा गायिकाद्वय मिलन नेवार र प्रविशा अधिकारी भित्रिएका छन् ।